I-China Sprayer kanye ne-Mist Machine Fektri kanye neFektri | Zhongmaohua
1. Intuthu kanye nethoni lamanzi kutholakala ngemibhobho ekhethekile ehlukahlukene, futhi umusi nentuthu yamanzi inhle. Faka ipayipi lokufafaza intuthu, intuthu inkulu, umphumela wentuthu ungcono, nentuthu iyaminyanisa; faka ipayipi lokufafaza amanzi, izinhlayiyana zamanzi ezinamanzi ezinamachaphaza achazwe ngokuningana futhi ziyafana, izinhlayiya zenkungu zintanta kangcono, umphumela wezidakamizwa uhlala njalo, futhi nomphumela wokuvimbela uyaphawuleka, Umphumela wesicelo sokufafaza wevolumu yangempela.
2. Ububanzi bezinhlayiya ezingamakhompiyutha ezikhiqizwe ngumshini we-mist mist bungaphansi kwama-microns angama-30. Ngenxa yesisindo esikhanyayo, izinhlayiya ze-Ultra-fail emihle azithinteki ngamandla adonsela phansi. Ngeke ihlale phansi ngokushesha ngenxa yamandla adonsela phansi njengamaconsi akhiqizwa izifutho zendabuko. Iyantanta, iyaphazamiseka, ingene kahle. Ingaphazamiseka futhi ihlale emoyeni isikhathi eside. Ukungena kwentuthu kungachazwa njengokuvunyelwe. Zifanele izikole, izibhedlela, izindawo zokudlela, izibulala-magciwane nezindawo zokucwilisa izindawo zomphakathi ezigcwele njengamahhotela, imboni yezokuzijabulisa, izinkundla zemidlalo, izimoto zabagibeli bezitimela, izindiza, imikhumbi, amabhasi nokunye ukuthutha komphakathi; iziteshi, izindawo zezindiza, amadokodo; amapaki, izindawo zokuhlala, amabhande aluhlaza, iziteshi zokudlulisa imfucumfucu Ukuvimbela kanye nokulawulwa komiyane, izimpukane, amaphela nezinye izidalwa zasemapulazini emapulazini, ezindlebeni zasemadolobheni naseziteshini zokushisa, ezansi, amaphrojekthi okuvikela umoya womphakathi, njll., ukuvimbela ukusakazeka umkhuhlane we-dengue noma amagciwane namagciwane; Ukulawulwa kwezinambuzane nokuthinta amagciwane ezindaweni zokugcina kanye nezimboni zezinto
3. I-Mist sprayer isetshenziswa kabanzi kukotini, ukolweni, ilayisi, ummbila nezinye izitshalo, izitshalo ezigcina ukushisa abamba ukushisa, izihlahla zezithelo, amahlathi (amahlathi ezomnotho, izingadi zasemadolobheni, izithombo zezimbali), izingadi zetiye nezinye izitshalo zokulawula izinambuzane nokusebenzisa kahle umanyolo ; indawo enkulu Ukuvimbelwa kwezifo kanye nezinambuzane ezinambuzaneni emadlelweni;
Esedlule: Izingubo Zokuvikela Ezingavikelekile
Olandelayo: Ifektri Eyisakhi Eyisakhi EseChina Eyisisekelo Esingalungisiwe Se-3ply Ebusayo Buso